Date My Pet » Afaka Food Ataovy Tsara fifandraisana rehetra Mpianatra?
Rewind miverina any am-pianarana siansa sekolim-panjakana, rehefa nianatra ny fototra ilaina eo amin'ny fiainana.
Ny lohany dia feno fahalalana amin'ny fomba toy ny olombelona mila famatsiana tsy tapaka ny rivotra, rano sy ny sakafo ho tafavoaka velona. Antoka, rivotra sy ny rano dia zava-dehibe, fa ny maro ny zava-dehibe iray tsara fanahy ny fepetra takiana dia ny tena mijoro avy no sakafo. Fa angamba ny aho 18 taona ny lehilahy, izay indraindray tena mihevitra ny filan'ny nofo toy ny misakafo, fa amin'ny danitra ny mpianatra sakafo be hery mihazona.
Ny sakafo no mahatonga antsika mbola manan-karena amin'ny vola tanteraka tapaka, sakafo mitondra namana miara-, sakafo no antony fankalazana isan'andro, ary afaka manao fifandraisana mpianatra tsara kokoa.
Aleo hotantaraiko ...
Aho fa tsy mpahay tantara malaza fa tsara tarehy aho antoka fa hatramin'ny am-piandohan'ny fotoana, fifandraisana no nitarika sy Niroborobo noho ny sakafo.
Cavemen sy cavewomen bonded ny volana-jiro tsara fiaraha-misakafo ny natono sy voanjo squirrel. Vanim-potoana ny Viking nahaforona ny fotoana tsara eo tia nandray anjara nandritra ny hilazana amin'ny fo manontolo hoe fanasana. Amin'izao fotoana izao, dia nivoaka ho daty kafe dia mety anjara karazana sakafo. AZONAO TSARA.
Ao amin'ny faritra ny mpianatra, sakafo mbola manana toerana io ny toerana ambony izay rehetra azontsika atao amin'ny fifandraisana.
Pizza dia mety maneho ny zavatra maro sy nanan-kery indrindra fifandraisana mpamorona ny fotoana rehetra. Tsy izany mihitsy ve no misy tovovavy hoe tsy ho tsara tarehy ny pizza daty (indrindra raha ny amin'ny tsara fanahy kokoa fella). Fihetsika tsotra toy ny antokony sy na mandeha ho mahafinaritra fandehandehanana afovoan-tanànan'i ho any amin'ny toerana ny pizza dia manao fifandraisana SALAMA tsara.
Ny zavatra rehetra atao fotsiny mora kokoa ny amin'ny sakafo.
Na izany ny voalohany na ny daty daty amby roa-polo, raha mahakasika sakafo ianao sy ny namanao dia samy manana resaka hikoriana tsara kokoa, tsiky dia ho mamiratra kokoa, ny tenda kokoa feno fahasambarana sy ny kokoa ny fifandraisana hiroborobo.
Raha mipetraka amin'ny trano tamin'ny miasa fatana, fanendasa-, toaster, microwave na ny fanafanana jiro dia afaka ihany koa mandray anjara amin'ny fanamafisana orina ny fifandraisana ity. Ny mahandro sakafo miara-, na fandraisana nifandimby mba hanomana tsara noho ny manan-danja Niely koa dia ho fotoana mahafinaritra, ary hitondra anao kokoa miara- (na dia ny fahaiza-mahandro sakafo dia akaikin'ny ... KD tsy mbola sakafo).
Izany dia mitondra antsika ho amin'ny fiainana-ponenana. Misy zavatra tsara tarehy mpianatra rehetra izay manana drafitra sakafo dia hahatakatra. Miaraka tsotra mahitsi- ny plastika, olona mahazo sakafo be dia be ho an'ny fahatsapana hoe manao ahoana ny tena kely vola. Swipe, mihinana, ary raha mety tafiditra mora foana ny lafiny tantaram-pitiavana. Drafitra sakafo tena mety dia azo ampiasaina ny toeram-pianarana rehetra sy amin'ny afovoan-tanàna misy toeram-pisakafoanana. Izany dia miteraka mora ny fidirana amin'ny sakafo ka noho izany fomba tsotra mba handoavana ny daty sy ny handeha amin'ny.
Eto amin'izao tontolo izao ny fianarana ambony, sakafo dia afaka manao fifandraisana mpianatra mora kokoa, tsara kokoa, ary be kokoa fotsiny fa milay. Nilaza izy ireo hoe tia dia tsy mila antony ... fa mila sakafo azo antoka.